Public Health Concern ४ प्रकारका औषधि बजार बाट फिर्ता गराउदै औसधि ब्यबस्था बिभाग!(सूचना सहित) – Public Health Concern
४ प्रकारका औषधि बजार बाट फिर्ता गराउदै औसधि ब्यबस्था बिभाग!(सूचना सहित)
औषधि व्यवस्था विभागले बजार विक्री–वितरणका लागि राखिएका ४ औषधि न्यून गुणस्तरको भएको पुष्टि गरेको छ । नियमित बजार अनुगमन तथा गुणस्तर परीक्षणका क्रममा गुणस्तरहीन पाइएका ती औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न विभागले सम्बन्धित कम्पनी तथा आयातकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । न्यून गुणस्तरका औषधिमा स्वदेशी र विदेशी कम्पनीका छन् ।
विभागका अनुसार विजयदीप ल्याबोरेटोरी लिमिटेडले उत्पादन गरेको ब्याच नम्बर पिएल–०३२ को ‘पान्डिया प्यान्ट्रोप्राजोल सोडियम ट्याबलेट्स युएसडी’ नामक औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको छ । सोही कम्पनीको ब्याच नम्बर पिएएल–०१७ को सोही नामको औषधि पनि न्यून गुणस्तरको पाइएको विभागले पुष्टि गरेको छ ।
त्यसैगरी, भारतीय कम्पनी हिन्दुस्तान मेडिसिन्स प्रालिको ब्याच नम्बर २३० को ‘डेक्स्ट्रोज २५ एमएल’ गुणस्तरहीन पाइएको छ । त्यस्तै, आर्य फार्माल्याब प्रालिको उत्पादन ब्याच नम्बर डिसिएल–४५००३ को ‘डिक्याट्सी सस्पेन्सन २०० एमएल’ पनि ल्याब परीक्षणका क्रममा न्यून गुणस्तरको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
उल्लेखित उत्पादन औषधि ऐन २०३५ को दफा १४ बमोजिम विक्री–वितरण रोक्का गरी बजारबाट तुरुन्त फिर्ता गर्न सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ । यसअघि पनि विभागले विभिन्न समयमा गरेको अनुगमनका क्रममा विभिन्न कम्पनीका औषधि न्यून गुणस्तरका भेटिएका छन् ।
औषधिजस्तो संवेदनशील उत्पादनमा गुणस्तरको मापदण्ड पूरा नगरिँदा जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । तर, नियामक निकायले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन ।
सबै औषधि पसल तथा कम्पनीहरूको र सबै उत्पादनको अनुगमन गर्न सम्भव नभएको विभागले बताउँदै आएको छ । जनशक्ति अभावका कारण आफूहरूले सीमित उत्पादन, पसल र कम्पनीको मात्र अनुगमन गर्न बाध्य रहेको विभागको भनाइ छ ।